Linggba ígwè nwere ike ịkpata kansa? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Ọrịa na-agba ịnyịnya ígwè - onye ndu kachasị
Linggba ígwè nwere ike ịkpata kansa?
Ihe omumu ohuru na-eme ka esemokwu a na-aga n'ihu banyere ihe ize ndụ ahụike nkeigweịnyịnya maka ụmụ nwoke: Ndị nchọpụta chọpụtara nandị na-agba ịnyịnya ígwèWHOigwe kwụ otu ebendị ọzọ nwere ike ihu nsogbu dị elu nke prostatekansa, ma obughi oke ohere nke infertility or dysfunction erectile.18. 2014.
Ma ọtụtụ n’ime anyị na-agba ịnyịnya ígwè ma anyị enweghị nsogbu ọ bụla. Somefọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, n'aka nke ọzọ, na-eme ya. Enwere m, ya mere enwere m ike ịgwa gị na mgbe ihe mere na ọ na-echegbu onwe ya.
na-eme mmanu oliv ka obara obara obara
Lee - nke a bụ 'chi m! My amụ amụ kpamkpam! 'Anyị ga-alaghachi na nke a ka anyị na-enyocha okwu gbasara ahụike ụmụ nwoke na ịgba ịnyịnya ígwè ha. Iji mee nke a, anyị na otu n'ime ndị isi urologists UK - nwoke aha ya bụ Anthony Koupparis - jikọrọ aka - iji nye ndụmọdụ siri ike, bara uru nke ụmụ nwoke niile na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ị shoulda ntị na mgbe ịchọrọ ihe kpatara ọzọ karịa ahụmịhe ahụike dị ukwuu iji kwenye ihe ọ sị na ya onwe ya bụkwa nwoke nwoke ndị ikom a na-anọkarị ọdụ na sadulu. Tupu anyị amalite ọ bụ ezie, lee nkuzi ihe ngwa ngwa.
Perineum nwekwara arịa ọbara buru ibu na akwara pudendal gị, nke na-enye mmetụta nke mpaghara ahụ ma yabụ na-enye aka na ụlọ ahụ. N’elu perineum bụ prostate gị, gland nke na - ewepụta mmiri seminal na - agafe eriri afọ. N'iburu anatomi anyị na ọdịdị nke ihe ahụ, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịme njikọ n'etiti ịgba ịnyịnya na ihe mgbu ma ọ bụ nhụjuanya, nrụrụ erectile na nsogbu prostate, mana ka anyị leruo ya anya.
Ma, echegbula. O nweghi ihe doro anya karia ihe ị hụburu, ha gwara Anthony ka ọ kwụsị okwu a. Yabụ anyị nwere ọnụọgụ, nrụrụ erectile yana ọrịa kansa prostate, ọkachasị kansa prostate.
Echere m na anyị maara ibe anyị nke ọma iji gwa m banyere ya. Ọ bụ mgbe m nọ n'ọdụ ụgbọ elu ikuku na Indianapolis na anyị na-eme nyocha oghere ikuku, n'ọnọdụ nke ị ga-eji nwayọ nọdụ na igwe kwụ otu ebe ruo nkeji iri atọ mgbe igwe kwụ otu ebe na-eme ikuku ikuku. Ihe ọ pụtara Ọ ga-abụrịrị na ị naghị emegharị ahụ gị elu, n'ihi na ụdị nchagharị ọ bụla ga-agbagọ nsonaazụ ahụ.
Yabụ na ọ bụ ọnọdụ amamịghe na-agba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe na mgbe nkeji 30 m ga-apụ ma achọpụtara m ngwa ngwa na enweghị m mmetụta na amụ m, nke na-aga n'ihu, n'ihi na ọ dabara na ị maara na mmetụta ahụ alaghachila. Na ngwụsị nke ụbọchị, echere m na ọ dịghị ihe mere na ogologo oge, mana gịnị na-eme na obere oge? N'ụzọ bụ isi n'ihi nrụgide ị na-etinye ozugbo na perineum, ị na-agbanye akwara ma ị na-agbanye ụfọdụ arịa ọbara na nke ahụ bụ ihe na-akpata ụfụ. Mgbe oge ụfọdụ nọdụrụ ala na akwara, ọ ga-ewe obere mmebi nke na-abụghị mmebi ogologo oge, ọ na-ebute isi ike na mpaghara ọ na-eje ozi, nke bụ ihe mere gị.
Amaara m karịa m, ị ga-enweta ezigbo igwe kwụ otu ebe na mmadụ ga-ele oche gị anya yana ihe niile so ya. Ugbu a ọ bụrụ na ị banye igwe kwụ otu ebe gị ogologo oge na oge ọ bụla ọ na-ada ụda na mpaghara ahụ ma ọ na-ada ụda ma mgbe ahụ ị na-eme otu ihe ugboro ugboro, ị ga-emerịrị mmebi ogologo oge, mana ọgụgụ isi na-ewe oge na mgbe ọ na - eme mgbe ahụ ịnweta igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị na oche ziri ezi. Otu oge ọgbụgba mgbe nke ahụ gasịrị agaghị emebi emebi na-adịte aka na mpaghara a ma ọ bụ ụlọ ọ bụla na ihe yiri ya.
Mgbe ahụ isiokwu na-esote ga-abụ nrụrụ erectile ma dabere na ihe anyị nụrụ banyere nro, enwere njikọ mgbe ahụ n'etiti ịgba ígwè, ọnụọgụ ugboro ugboro na-eduga na nrụrụ erectile? - azịza ya bụ mba. Ihe ka mkpa bụ mkpa ọ dị nrụrụ erectile na mbu. Usoro ndị na - eduga na nsogbu nrụrụ bụ otu ihe ahụ na usoro nke na - ebute ọrịa obi, nke na - eduga na nkụchi obi.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga ma ọ bụ ọbara mgbali elu, ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, ikekwe ị nwere nrụrụ erectile, mana ị nwekwara ike ịrịa ọrịa obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị toro eto ga-amalite ịgba ịnyịnya ígwè. Ugbu a, ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè ma na ị ka nọ n'afọ ndụ ahụ na-amalite nrụrụ erectile, ihe mbụ ị chere ekwesịghị ịbụ, 'Oh, nke a bụ ihe m ji anọ ọdụ n'ihi naanị ịgba ịnyịnya ígwè.' Okwesiri ka m ghara lie isi m n'ájá Nke a nwere ike ịbụ ihe na-egosi ihe achọpụtabeghị.
Etosiri m ịlele ihe a. Ọ ga-adị gị mma na eziokwu ahụ bụ na ọ ga-esiri gị ike imebi ụdị akwara gị nke ga-eduga gị na nrụrụ erectile. Yabụ kedu ihe siri ike ime nke ahụ? Wedị ahụ dị egwu na-emetụta perineum gị agaghị enye gị nrụrụ erectile.
Ma n'eziokwu, ọ naghị enye gị nrụrụ erectile. Gaa ma lelee ya. Nke mbụ, iji nweta MOT kwesịrị ekwesị site n'echiche nke obi, gịnị kpatara na ị gaghị enwe nsogbu ịgwọ ọrịa. Echere m, okirikiri ezuola.
O meela ka ị bụrụ ntakịrị ihe na-adịghị mma na ezigbo nsogbu ahụike ị nwere ike ịhazi ya. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ ha. Kedụ banyere nsogbu metụtara prostate na ọrịa prostate ọkachasị.
ịnyịnya ibu jaket reviews
N'ụzọ dị mma, ịgba ịnyịnya ígwè enweghị mmetụta na ọrịa cancer prostate. Ma, ọbụghị otu ọrịa kansa prostate si amalite, ọ bụkwa ajụjụ ma a na-enyocha gị maka ọrịa kansa prostate n'ụzọ na-ezighi ezi. Otu ihe anyị ji enye ihe ngosipụta nke ọrịa Ọrịa prostate bụ ịnwale ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị gbaa okirikiri ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ ọbara na-eweli elu. nwalee nnwale ọbara nke antigen kpọmkwem nke na-erute na ị mere nyocha ọbara ahụ ka ọ dị elu ma nweezie ọtụtụ nyocha ị na-achọghị mgbe ọ bụla n'ihi na ị na-agba ịnyịnya ígwè na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - enwere ohere enwere ike imetụ ya ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara akara mkpụrụ ndụ maka ọrịa kansa prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa kansa prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma You ga-adịkwu mma, ọ na - eme ka ahụike obi gị nwee ihe niile na - ebelata ohere ị nwere ịrịa kansa ma ọ naghị emetụta nyocha ọrịa kansa prostate na - ekwesịghị ekwesị.
Ma na ọ na-aga n'ihu. N'ụzọ dị mma, enweghi nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya.
Yabụ ka anyị na-etolite, ohere nke ịrịa ọrịa cancer prostate dị elu. Ihe mbu ikwesiri ime ugbua bu ima ihe ufodu ihe mgbaàmà bu ugbua, ihe ndi ayi n’ele anya bu ihe dika ihe mgbaàmà banyere oru mmiri, mgbu azu, nsogbu banyere obara n’ime mmiri, udi ihe ndia, oburu n’ichegbu onwe gi. ihe ndị a, ọ bụrụ na ị hụ ihe ndị a ọzọ Mgbe ahụ ị ga-aga hụ dọkịta urologist ma ọ bụ dọkịta ezinụlọ gị ma nwee mkparịta ụka dabara adaba banyere nyocha ahụ. Ọ pụtaghị na a ga-enyocha gị maka ọrịa kansa prostate, mana dọkịta ahụ ga - agagharị gị site na ihe ọma nke ule ahụ na ikekwe nyocha nke ule ahụ.
Unu abụọ ga-ekpebizi ma ọ̀ ga-eme ka ọ ghara ịga. Achọghị m ka ụmụ okorobịa leghara ya anya na nke mbụ. Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-achọta ihe ndị a tupu ụbọchị ndị a ma enwere ike ịhazi ya kpamkpam.
Kedu afọ anyị na-ekwu maka ebe a? Kedu afọ ị kwesịrị ichegbu onwe gị? Enwere m ekele na enwere ike bụrụ ihe atụ dị egwu ị maara, ikpe mbụ, mana ị ziri ezi.
dogma f8 ọnụahịa
Ya mere, na nke m na omume m enwere foto a gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, tinye isi na ájá ma duzie nwee mkparịta ụka kwesịrị ekwesị na nyocha nke ihe bụ nsogbu bụ, ọ bụrụ na enwere ọkọlọtọ ọ bụla na-acha uhie uhie ime ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha Ya mere, ọ nweghị njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ọrịa cancer prostate, mana ọrịa prostate bụ nnukwu ihe maka nnukwu akụkụ nke ndị ọgba tum tum Nsogbu naanị n'ihi na ha bụ ụmụ nwoke, ha emeela agadi, ya mere, ha kwesịrị ichebara ya echiche. Amaghị m gbasara gị mana ihe m ga-eji wepụ mkparịta ụka a ya na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iji ahụike anyị gwurie egwu. Anyị kwesịrị ịnwụ ọnwụ nke aka anyị ma chọọ enyemaka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị anaghị enweta gs bụ ikekwe nsogbu kachasị anyị ga-eche ihu ugbu a ọ ga-abụ na m agabigala ntakịrị ozi karịa nke m nyere gị. ọnụ amụ na ifufe ọwara Ma m na-eche n'echiche ahụ ma eleghị anya, anyị niile kwesịrị ịnwa ịnwe mkparịta ụka, yana ma eleghị anya ndị enyi anyị na klọb na-agba ya na ngwụcha izu a ma ọ dịkarịa ala nwee isiokwu a echere m na nke ahụ ga-abụ nke dị mma.
Na ngụkọta, mmadụ 2,430 n’ime ndị ahụ amụrụ nwụrụ, a chọpụtara na 3,748 chọpụtarakansana 1,110 nwere nsogbu obi. Mana, n'oge ọmụmụ ihe ahụ, na-emechi anyaịgba ígwèebipụ ihe ize ndụ nke ọnwụ site n'ihe ọ bụla kpatara site na 41%, nsogbu nkekansasite na 45% na ọrịa obi site na 46%.
Cycgba ígwè ọ dị mma maka ọrịa cancer?
Cygba ígwènwere ike inyere gị aka ịnọgide na-enwe ahụ ike
Ka ị na-arụ ọrụ karị, otú ahụ ka ị na-ebelata ihe ize ndụ gị maka ọrịa ndị na-adịghị ala ala, gụnyerekansa, ka Thoman na-ekwu.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - agagharị kwa ụbọchị?
Mgbeịgba ígwèna-akpali ma na-aka mmanke giobi, ngụgụ na mgbasa, na-ebelatanke giihe ize ndụ nke ọrịa obi.Cygba ígwèna-ewusinke giakwara obi, na-eme ka izu ike izu ike na-ebelata ogo abụba ọbara.
Cycgba ígwè ọ dị njọ maka spam?
Na-agba ịnyịnya ígwèn'ihi na awa ise ma ọ bụ karịa n'izu jikọtara alaspamgụọ na ndị ogbenyespammotility n'etiti ụmụ nwoke, dị ka otu nnyocha nke onye na-eme nchọpụta si Mahadum Boston University of Health and BU's Slone Epidemiology Center.
Gịnị bụ mmetụta nke ịgba ígwè?
Fọdụ na-echegbu onwe ha maka nke ahụigwe kwụ otu ebenwere ike imebi ọrụ mmekọahụ ha, nke nyocha na-akwado. Nnyocha egosiwo nke ahụna-agba ọsọnwere ike imebi ndụ gị na-enwe mmekọahụ: Na-eme ka ọnụọgụ na amụ, ihe egwu dị ukwuu nke nrụrụ erectile, na mbelata nke nwanyị.
N'izugbe,ọgwụa na-enye ọgwụgwọ na usoro ihe omume. Nke a na-enye ohere ịwakpo mkpụrụ ndụ cancer n'oge oge ha kachasị emetụta, ma na-enye ohere ka sel nke anụ ahụ nwee oge iji gbakee site na mmebi ahụ.
Kedu ka ọgwụ nje cytotoxic si arụ ọrụ?
Ndị aọgwụ ọjọọadịghị amasịọgwụ njeji agwọ ọrịa. Haọrụsite na igbanwe DNA n’ime mkpụrụ ndụ kansa ka ha ghara ịba ụba na ịmụba.
Cycgba ịnyịnya ígwè ọ dị mma maka mgbaze?
Gba ígwèma ọ bụịgba ígwènwere ike inye aka melitemgbazedị ka ọ na-achi achi ngwa ngwa nri site na eriri afọ. Ọ na-enye aka belata mmiri furu efu na stool. Nke a na-enye aka imeziwanyemgbaze. .B.igwe kwụ otu eberide nke 20-30 nkeji na a ụbọchị nwere ike ime ebube n'ihi na gịmgbaze.
Cycgba ígwè ọ dị mma maka ahụike ọgụgụ isi?
A ọmụmụ Science Direct gosiri na aerobic mmega, nke na-agba ọsọ naịgba ígwèdịukwuatụ, nwere ike budata belata mmetụta nke nchekasị, nwere ike igbochi nchekasị ịmalite ịmalite ọgụ ọgụ zuru oke ma ọ bụnsogbu.
Kedụ ka ndị ọgba ịnyịnya ígwè si enyere ụmụaka nwere ọrịa kansa aka na UK?
CYCLISTS Fighter CANCER na-enyere ụmụaka na ndị na-eto eto bi na kansa aka n'ofe UK iji nwetaghachi ahụ ike ha, ike ha, ahụike ọgụgụ isi na ntụkwasị obi site n'inye ha igwe kwụ otu ebe ọhụrụ, mgbazigharị pụrụ iche, tandems, akụrụngwa ndị ọzọ na nkwado.
Kedu ka ndị dọkịta NB si agba ịnyịnya megide ọrịa kansa ọrụ?
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nchegbu, biko egbula oge iru site na-emecha anyị Kpọtụrụ Anyị ụdị. Ndị NB Dọkịta Na-agba ịnyịnya Megide Ọrịa Cancer bụ afọ nke isii. Enweta ego na-akwado Dr. Sheldon H. Rubin Oncology Clinic na oncology inpatient unit na The Moncton Hospital.
Enwere uru ahụike dị na ịgba ígwè ịrụ ọrụ?
Ndị ọrụ nyochara ihe karịrị mmadụ 260,000 n'ime afọ ise - wee chọpụta na ịgba ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ nwere ike belata ndị na-agba ịnyịnya ohere ibute ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa kansa na ọkara. A na-agụ akwụkwọ zuru ezu ebe a.